Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguElliot Lake Cottage Rentals
UElliot Lake Cottage Rentals yi-Superhost
Yonwabela i-cottage enemibono emangalisayo kunye nendawo yonxweme yabucala ebekwe kwichibi elicocekileyo. Relax entlango apho unokuqubha kumanzi acwengileyo ashushu okanye iphenyane elinqumla echibini uye kwisiqithi esincinci kwaye ukhethe amaqunube asendle. Indawo enkulu yokubalekela izibini okanye iintsapho ezifuna ukuchitha ixesha zidibanisa nendalo kwaye zonwabele bonke ubomi bendlwana.
Ichibi lilungile ekulobeni kwaye ungagqiba imini ngokonwabela umlilo wenkampu ngqo kwindawo engasemanzini. Lo mhlaba ulungele izinja. Iitawuli zifakiwe. Kufuneka eze neebhatyi zobomi zabantwana. Uya kuba nokufikelela kuyo yonke ipropati. Kananjalo ube nokufikelela kwiphenyane ukuze ujonge echibini. Sinemidlalo yebhodi kunye neemuvi onokuthi uzibukele ngeentsuku zemvula ukuze ujabulele amava e-cottage. Zininzi izinto zokwenza e-Elliot Lake, sifumaneka kwimizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko. Sikufuphi nemoto yekhephu kunye neetrayile ze-ATV kwaye zikwakufuphi kakhulu neQuirke Lake isikhephe sokuqaliswa ukuba unqwenela ukungena kumanzi amakhulu okuloba. Kukho i-cell booster kwi-cottage ukuze ufumane ulwamkelo olungcono kwindawo yekhitshi. Kukwakhona ngoku i-wifi ekhoyo kwi-cottage kwaye ilinganiselwe kwi-1GB/ngosuku.
Zininzi izinto zokwenza e-Elliot Lake, sifumaneka kwimizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko. Sikufuphi nemoto yekhephu kunye neetrayile ze-ATV kwaye zikwakufuphi kakhulu neQuirke Lake boat lauch ukuba unqwenela ukungena kumanzi amakhulu okuloba.
Umbuki zindwendwe ngu- Elliot Lake Cottage Rentals
Kulula ukusifumana nge-imeyile okanye ngefowuni